Zimbabwe Electoral Commission Archives » ZOOM Zimbabwe News
Home Posts tagged Zimbabwe Electoral Commission
Zanu-PF, MDC lock horns in Zaka East by-election
FOUR candidates, including those from the ruling Zanu-PF and the biggest opposition MDC led by Nelson Chamisa, will lock horns in the Zaka East by-election next month. The seat fell vacant following the death from pneumonia Continue Reading...
ZEC gears for free, fair, peaceful 2023 elections
Zimbabwe Electoral Commission (ZEC) has said that it is taking measures to ensure that electoral laws are aligned with the Constitution. ZEC chief elections officer, Mr Utloile Silaigwana, said ZEC was mandated to promote Continue Reading...
ZEC to re-draw constituency boundaries: Justice Chigumba
ZIMBABWE Electoral Commission Justice Priscilla Chigumba has indicated there is a huge possibility that some constituency boundaries will be re-drawn ahead of the 2023 elections. Justifying the need for new Continue Reading...
The Election Resource Centre (ERC) acknowledges the appointment of the new Chief Election Officer (CEO), Mr Utloile Silaigwana with effect from July 1, 2019. The appointment fills a vacancy left after the Continue Reading...
MDC worried over Silaigwana’s appointment as ZEC Chief Elections Officer
The MDC is worried that Utoile Silaigwana, a former army Major who joined ZEC as a serving military officer, has now been confirmed as the electoral body’s substantive chief elections officer. Continue Reading...
The Zimbabwe Electoral Commission (ZEC) has appointed one of its long serving employees Utloile Silaigwana as the substantive Chief Elections Officer. The appointment is with effect from 1 July 2019. A Continue Reading...
The Zimbabwe Electoral Commission says it has not lost a single case out of the 73 poll petitions concluded at the courts following the 2018 harmonised elections, saying this proves it managed the elections in Continue Reading...
A Zimbabwe Electoral Commission (ZEC) senior official has poked fun at the way the opposition MDC has prepared and run its Congress vote in Gweru. In a tongue-in-cheek comment, ZEC’s Commissioner in Continue Reading...
Supreme Court to decide Nduna’s fate
THE Supreme Court yesterday said an appeal filed by MDC Alliance candidate for Chegutu West, Gift Konjana, challenging the election of Dexter Nduna (Zanu PF) — who was erroneously declared the winner by the Zimbabwe Electoral Continue Reading...